SingForYou.net - MyuKhoe's Channel
MyuKhoe 's Channel
Contest Winner credit တွေရစေချင်လို့...
End date: 09/11/2010
Last Login: 11-15-2018 23:06
" တောင်းပါ. သင့်အား ပေးလိမ့်မည်။ ရှာဖွေပါ. သင် တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ တံခါးခေါက်ပါ. သင့်ကို ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ "
' If the Mountain does not come to you, you must go to the Mountain. '
santimaung on Jan 1, 2012
lar lel twar par the shin new year nae athu chit sis...........lay nae pyaw shwin naing par say
Phoehtaung on Dec 17, 2011
အိမ် ရှင် ရှိ လာ; ဗျို့...........မ မြင် တာ ကြာ တော့ လွမ်; လွန်; လို့ ဒီ မှာ လာ ပြီ; မွှေ နှောက် သွာ; ပါ တယ်...............
shellyphyo on Sep 24, 2011
အိုးးးးးးးးးးးး.ဒီချယ်နယ် ထဲကို.ခုမှ လာရတယ်.အိမ်ဝေးလို့.:P.သီချင်းလေးတွေကလဲ ကောင်း.ဆိုတဲ့ သူကလဲ အသံကောင်း အဆိုကောင်း ဆိုတော့ နားထောင်လို့ မ၀နိုင်အောင်ပါပဲ.ဖြိုးး အတွက် ကတော့.ကိုမောင်မြူဆိုး ဆိုသမျှ ထာဝရ အားပေးနေမယ့် ပရိတ်သတ်ကြီး ပါရှင့်.ကမ္ဘာ ကြီးတာ ပျက်သွားမယ်နော်.ဖြိုး ကတော့ မပျက်မကွက် နားဆင်အားပေး နေမယ်.သိလား.စိတ်ချနော်.တာ့တာ ပြန်ပြီရှင့်.း)ဘာမှလဲ စားရဘူး.ပြောရတာ မောသွားတာပဲ ဟိ.း)))))))))))
mange on Sep 4, 2011
ကိုမြူခိုးရေ ... အလည်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် ... မငယ်ရဲ့ သီချင်းတွေကို မအားတဲ့ကြားက လာရောက်အားပေးနားထောင်သွားတာလည်း ကျေးဇူးအထူးပါ .. အခုလည်း ရောက်တုန်းလေးကို သီချင်းလေးတွေ နိုင်သလောက်အားပေးခဲ့မယ်ရှင် ... နောက်လည်း မကြာမကြာရောက်ဖြစ်မှာ အသေအချာပါ ... အရာရာအဆင်ပြေ ပျော်ရွင်ပါစေရှင် ....း))
DAVIDPHYO on Sep 3, 2011
ကိုမြူခိုးရေ..သီချင်းတွေ နားထောင်သွားပါတယ်ဗျာ...မြန်မာသံစဉ်တွေကိုလဲကျနော်ကမြတ်နိုးပါတယ်rnနောက်မှ တပုဒ်လောက်ဟဲကြည့်ပါဦးမယ်ဗျာ..rnပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ..
4pochit on Aug 19, 2011
ဆိုထားသမျှ...အရမ်းကိုကောင်းလွန်းနေတယ်ဗျာ.......... အားပေးသွားပါတယ် နော်..........
music-rocker on Aug 12, 2011
အကို ရဲ့နေရာလေးကိုအခုလိုလာရတာ ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မဆုံးပါခင်ဗျာ အကိုရဲ့အးပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အကိုရဲ့အကြိုက်ဆုံး Arsenal က လဲ ကျွန်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ အခုလို Arsenal ပရိတ်သတ် music- rocker...
ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်... တံခါးခေါက်ဆိုလို့ ခေါက်ပီး ၀င်ခဲ့ပီနော်... :P တောင်းပါဆိုဒေါ့ ဘာတောင်းရပါမလိမ့်... ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေဆိုတော့ အိမ်ရောက်ရင်ရှာကြည့်ဦးမှ... ဘရိုမြူခိုးရေ... အလည်လာရင်း အမှတ်တရကွန်မန့်ချန်ရင်း ချစ်သူလေးနဲ့ သီချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်သောဘ၀ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေနော်..း))))
tarpoelay on Jul 29, 2011
ဘရိုရေ..ကျွန်တော် လာလည်ပါတယ်ဗျိုးး ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက် တံခါးခေါက်နေပြီဗျိုးး .ဘယ်သူလာတံခါးဖွင့်ပေးမှာပါလိမ့်..:) ပျော်ရွှင်ပါစေ ဘရိုရေ..
View All Recordings of MyuKhoe